Ra’isal Wasaaraha Hangury Oo Sheegay Inaanay Muslimiinta Muhaajiriinta Ahi Dalkiisa Galayn+ Tahriibeyaal Tareen Isku Dhigay+Sawirro |
Ra’isal Wasaaraha Hangury Oo Sheegay Inaanay Muslimiinta Muhaajiriinta Ahi Dalkiisa Galayn+ Tahriibeyaal Tareen Isku Dhigay+Sawirro
Brussels(GNN)Ra’isal wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban, ayaa ku dhawaaqay inaanu doonayn in dalkiisa ay galaan muslimiin badan oo ka mid ah muhaajiriinta ka qaxaya colaadaha iyo nolol xumada meelo kala duwan oo dunida ah ka jira.
Isagoo ka hadlayay mawjadaha magan galyo doonka ah ee dalkiisu difaaca kaga jiro ayuu sheegay inay xaq u leeyihiin inay dalkooda u diidaan Muslimiinta “Waxaan qabaa inaanu xaq u leenahay inaanu go’aansanno in aanan rabin Muslimiin badan oo wadankayaga soo gasha” ayuu yidhi Viktor Orban oo suxufiyiinta kula hadlayay xarunta Midawga Yurub ee Brussels.
Viktor Orban, waxa uu muslimiinta dagaallada ka baxsanaya ee waddanka Suuriya iyo wadamada kale uga digay inaanay ku soo lugu’in dalka Hungary, islamarkaana aan la aqbali doonin , waxaanu difaacay dayrka waddankiisu iskaga xidhayo qaxoontiga“ Fadlan ha iman. Waa khatar inaad timaadaa(in dhibaato idin gaadho ayaad khatar ugu jirtaan). Idiin ma damaanad qaadi karro in la idin aqbalayo, mana aha in dadka been loo sheego,” ayuu yidhi Mr Orban.
Waxa uu intaasi ku daray “ Haddaanu nahay Hungary waxaa na haysa cabsi badan, dadka reer Yurub way cabsanayaan, maxaa yeelay waxay rumaysan yihiin inaan hogaamiyeyaasha Yurub oo ra’isal wasaareyaashu ka mid yihiin xakamayn Karin xaalladda jirta(Arrimaha qaxoontiga).”
Hadalka Ra’isal wasaaraha Hungary ee muujinaya muslim nacaybka ayaa ku soo beegmaya iyadoo boqolaal muhaajiriin ah oo beegsanayay Austaria dalkiisu ka dejiyay tareenka ay la socdeen islamarkaana u qaaday Xero qaxoonti. Waxaa isku dhacay booliska Hungry iyo dadka tahriibayay.
wakhtigan dadka tarhiibaya ee bariga Yurub gaadhaya ayaa u badan shacabka Suuriya ee dagaalka sanadaha qaatay aafeeyay. dalkaasi oo wadamo kala duwani dano ka leeyihiin ayaa u muuqda mid dunidu indhaha ka qarsatay mushkiladaha ka socda.
Dadka tahriibayay ee tareenka ay saarnaayeen Booliska Hungary khasabka kaga dejiyay islamarkaana ku khasbay xero qaxoonti ayaa qaarkood isku dhigeen tareenka iyo xadiidka tareennadu ku socdaan isku dhigay iskuna nabay, inkasta oo boolisku ka kexeeyay.